Adị m njikere itinye iwu m.Gịnị bụ nzọụkwụ m na-esote?
Enwere ụzọ dị iche iche iji nye iwu.
1. Kpọọ ụlọ ọrụ ahịa na +86 0755-84550616.
2. Onye na-ere ahịa email ma ọ bụ WhatsApp.
3. Tin Order Forms, dejupụta ya kpam kpam ma zitere anyị ozi emailsales@bylandcan.com.
T/T, Western Union, L/C ma ọ bụ Lelee tupu oge eruo ma ọ bụrụ na ọ dịghị akaụntụ e guzobere.
Iwu kacha nta
Gịnị bụ opekempe ịtụ maka ngwaahịa Tins?
500ngụkọta tin, ihe zuru ezu nke ihe ọ bụla a na-ahọrọ maka mkpọ dị larịị na-enweghị mbipụta.
Kedu ihe kacha nta maka Tin Custom?
Dabere na nha na udi nke tin, ọnụọgụ ọnụọgụ bụ 5,000 - 25,000 iberibe.Ihe ndị na-achọ ngwá ọrụ ọhụrụ ga-achọ opekempe ka ukwuu na ogologo oge ndu.Biko mezue ajụjụ tin omenala anyị ma ọ bụ kpọọ onye na-ere ahịa maka ozi akọwapụtara na iwu kacha nta anyị.Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa gbasara ajụjụ gị akọwapụtara.
Otu ite omenala nke aha anyị dị na ya ga-amasị anyị.Nke a ọ bụ ihe Site na ala nwere ike inye?
Ee.Site na ala nwere ike ibipụta lithography omenala na ọla, n'ime ụlọ, na-eji ahịrị mbipụta agba 6 ọgbara ọhụrụ.Anyị nwere ngalaba Art Services na Prepress zuru ezu iji duzie ndị ahịa site na usoro.Anyị nwekwara ike ibipụta dijitalụ maka ọnụ ọgụgụ dị nta.
Achọrọ m ike dị ntakịrị ogologo / buru ibu karịa nha ngwaahịa gị.Nke a ọ dị mfe ime?
Dabere na-ewu tin anyị nwere ike gbanwee elu nke ọtụtụ gburugburu ma ọ bụ fancy ekara tins mfe na ẹdude tooling maka a omenala iji.Tin na-enweghị nkebi ma ọ bụ dọtara ga-achọ ngwa ọrụ ọhụrụ maka ngbanwe nha ọ bụla.Anyị na-emepe emepe mgbe niile na itinye ego na teknụzụ kachasị ọhụrụ nke ga-enye ọtụtụ nhọrọ maka ndị ahịa anyị.
Tin nwere nha ahaziri ahazi ga-amasị anyị.Byland nwere ike imepụta nha na ụdị agba 100% omenala?
Ndị otu Byland Can's Engineering nwere ike chepụta ụdị ọhụrụ maka osisi ụlọ nyere oge yana itinye ego dị mkpa iji kwado mmepụta akpaaka.Anyị na-ewepụtakwa ihe ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ mba ofesi mgbe ọ bụ ihe ngwọta kachasị mma maka ndị ahịa Site na ala Can ga-enyocha ọrụ ahụ iji chọpụta ụzọ kachasị mma iji hụ na nnyefe nke ngwaahịa dị elu na oge kwesịrị ekwesị.
Kedu oge ọkọlọtọ gị maka tin omenala?
3-5weeks nwere ngwá ọrụ dị adị na ihe osise gị.Na usoro niile dị n'okpuru otu ụlọ site na echiche ruo na njedebe, anyị nwere ike ịnye njikwa yana mgbanwe na nnyefe oge maka ndị ahịa anyị.
Ogologo oge ole ka m ga-enye iwu iji jide n'aka na m ga-enweta Tin Custom m n'oge ezumike?
Anyị na-agba gị ume ka ị mee atụmatụ n'ihu dịka o kwere mee.Nkwurịta okwu bụ isi!Ọ bụrụ na enwere oge ngwụcha nke achọrọ ka ezute maka usoro omenala, mee ka onye na-ere ahịa anyị mara usoro oge.Anyị nwere ike ịrụ ọrụ azụ site na ụbọchị nnyefe wee nye usoro iheomume maka nnata nke ịzụrụ ihe, ihe osise na nkwenye akaebe.Dị ka ọ dị na ọrụ omenala niile, mgbanwe nwere ike igbu oge mbupu nke ikpeazụ gị.Maka oge ndu ugbu a email anyị ma ọ bụ kpọọ 0755-84550616 wee gwa onye nnọchi anya ire ahịa.
Tin ndị ahụ ọ dị mma maka ngwaahịa nri?Anyị nwere ike nweta akwụkwọ ozi na-ekwu na tin ndị ahụ adịghị mma nri?
Tin ihe ịchọ mma bụ ngwugwu anabatara maka ngwaahịa nri.Anyị nwere ike ịkwado mkpuchi ime ụlọ maka ngwaahịa ndị ahụ bụ acidic ma ọ bụ mmiri.Anyị na-eji ink na mkpuchi FDA kwadoro ma nwee ike ịnye akwụkwọ sitere n'aka ndị na-ebubata anyị.A na-enyocha anyị kwa afọ site n'aka ọtụtụ ndị ahịa Fortune 500 wee nweta ikike maka irute ụkpụrụ dị elu maka ndị na-emepụta nkwakọ ngwaahịa nri.Ụlọ ọrụ anyị niile bụ SQF2 nke ụlọ ọrụ nri dị mma kwadoro.
Kedu ihe bụ oge ntinye akwụkwọ maka tin ngwaahịa?
2-3 izu dabere na oge na nnweta na oge nke gị iji.N'ịbụ ndị na-agba mbọ na mmemme ngwaahịa ngwaahịa niile nke afọ maka ihe niile egosipụtara, anyị na-emekarị nke ọma karịa oge ụzọ anyị kwuru.
Ogologo oge ole ka m ga-enye iwu iji jide n'aka na m ga-enweta usoro m n'oge maka ememme mmiri, wee nweta tin m niile?
Anyị na-agba gị ume ịtụ n'oge ezumike oyi.Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nyeghị iwu ka ọ na-erule ngwụsị oge okpomọkụ, nke a apụtaghị na ị gaghị enweta tin gị.Anyị na-arụ ọrụ iji mejupụta ngwaahịa ala anyị mgbe niile.Maka ozi gbasara ngwa ahịa akọwapụtara, zitere anyị ozi ma ọ bụ kpọọ 0755-84550616.
Mbupu & ibu
Kedu ka esi ebupu na gịnị ka ọnụ ahịa ibu ga-abụ?
Byland nwere ike ibuga site na ndị na-ebukarị (LTL / TL).Anyị na-ebugakwa UPS, DHL na FEDEX mgbe ndị ahịa anyị rịọrọ ya, agbanyeghị nke a abụghị nhọrọ kacha mma mgbe niile.
Gịnị kpatara na ị gaghị ebupu ụgbọ mmiri n'echi ya?
Byland Can Co. enweghị ike ibupu ụgbọ mmiri n'echi ya, n'ihi usoro mbupu dị ugbu a.Oge izizi nke Byland Can bụ izu abụọ.Anyị ga, mgbe enwere ike, nwaa ibupu ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ngwaahịa dị na nhazi mbupu na-enye ohere.N'ọnọdụ ụfọdụ ndị nkesa anyị nwere ike ibupu ngwa ngwa.
Anyị nwere ite mebiri emebi.Ọ dị ka ọ na-emebi nrụpụta.Gịnị ka anyị kwesịrị ime?
Ọ bụrụ na ịnatala mkpọ nke ị chere na ị nwere ntụpọ n'ichepụta, mee usoro ndị a.
1. Kpọọ onye na-ere ahịa gị.
2. Zipu ihe nlele nke tin.A ga-egosi ndị a na ngalaba QA anyị maka nyocha.
3. Ozugbo ngalaba QA anyị nyochara mmebi ahụ, onye na-ere ahịa gị ga-akpọ maka nchoputa ahụ.
Ọ dị ka ọ bụ mmebi ibu.Gịnị ka anyị kwesịrị ime?
Ọ bụrụ na ịnatala mkpọ nke ị chere na o nwere mmebi ibu, mee usoro ndị a.
1. Detuo ihe mebiri emebi ozugbo na Bill of Lading ma ọ bụ n'ụdị mmebi UPS ma ọ bụ FEDEX.Ọ bụrụ na ịmeghị ndetu ndị a, ị gaghị enwe ike itinye akwụkwọ maka mmebi ahụ.
2.Kpọọ onye na-ebufe ihe ka ọ gbaa akwụkwọ.Ha kwesịrị fax gị otu akwụkwọ anamachọihe a ga-ejupụta ma zighachi ya fax.
Anataghị m ite niile m nyere iwu.M ga-enweta nke fọdụrụ na mbupu ma emechaa?
Dabere na oge nke afọ, ụdị ma ọ bụ nha niile ị nyere iwu nwere ike ma ọ bụ ghara ịdị na ngwaahịa.Ọ bụrụ na ịnataghị tin niile n'usoro gị:
1. Lelee ndepụta nkwakọ ngwaahịa ka ịhụ ma ọ bụrụ na etinyela tin ndị ahụ iwu.
2.Ọ bụrụ na a na-enyeghachi ihe ndị na-efu efu, a ga-ebuga gị ihe ndị fọdụrụ na tin gị ozugbo ha dị.Ọ bụrụ na ịchọghị ịnata tins azụrụ azụ, ị ga-achọ ịkpọ onye na-ere ahịa gị ka ịkagbu nguzozi.
3. Ọ bụrụ na ndepụta nkwakọ ngwaahịa egosighi ihe ndị a nyere iwu azụ, kpọọ onye na-ere ahịa gị ma ha ga-enwe obi ụtọ ịchọpụta ihe kpatara na ị nwetaghị usoro gị zuru oke.
Kedu nke ka mma ịnakọta ma ọ bụ ibu akwụgoro ụgwọ?
N'okpuru bụ ndịiche dị n'etiti akwụgoro ụgwọ na ịnakọta mbupu.
1. Anakọta Mbupu: Ịkwụ ụgwọ maka ibu ibu bụ maka mgbe ebufe ibu.Ọ ga-adị mkpa ka e nye onye ọkwọ ụgbọ ala nlele tupu ebutuo ihe gị.
2. Ibu akwụgoro ụgwọ mbụ: Ụlọ ọrụ Byland Can ga-agbakwunye ọnụahịa nke ibu na akwụkwọ ọnụahịa gị.Enwere ego njikwa etinyere n'usoro a.
3. Byland nwere ike ụgbọ mmiri ma mkpokọta na Pre-akwụ ụgwọ Freight FOB Factory, na-enweghị ndị ọzọ.
Kedu ihe FOB pụtara?
FOB pụtara Freight On Board.Nke a pụtara na ibu ibu na-aghọ ihe onwunwe nke onye ahịa n'oge ọ na-ahapụ ebe FOB.Ihe niile a na-ekwu maka mmebi ibu ga-ejupụta na onye na-ebu ebu, na-enweghị ihe ọ bụla.
Ị na-ebuga COD?
Site na ala enweghị ike ibupu COD.
Igbe Tin ahaziri ahazi, Tin ịchọ mma akpa, Mpempe akwụkwọ CD, Igbe Tin Tii, Nkata Nchekwa igwe nwere mkpuchi, Okwu cd efu,